Inona no fantatrao momba ny SEO amin'ny tranokala vaovao?
Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy momba ny zo SEO ho an'ny tranokalam-baovao, satria mila tranokala lehibe kokoa ny tranonkala toy izany. Ny zavatra rehetra dia mety ho tsotra, toy ny amin'ny fanampian'ny Search Engine Optimization ny tranonkalam-baovao rehetra dia afaka mampihatra io fomba mahomby io amin'ny fampisehoana mpamaky vaovao bebe kokoa ary mampiova azy ireo ho an'ny mpamaky mihaona amin'ny mpamaky. Amin'izany fomba izany, dia omena torohevitra ianao handefasana votoaty vaovao vao haingana. Ny asa soratr'izy ireo dia tsy maintsy mampahafantatra sy miavaka mandrakariva, izany eo akaikin'ny seho rehetra ho an'ny tranokalam-baovao dia mila matetika - clubmaster ii ray ban. Fa manandrama tsy hampihatra ireo teknolojia mainty hoditra, toy ny fisorohana ny andinindininao tsy ho voafafa miaraka amin'ny teny fanalahidy, ny rohy mifototra, ny votoaty duplicated ary ny sisa.
Ireto manaraka ireto dia toro-hevitra mahasoa maro, avy amin'ny fomba fijerin'ny SEO ho an'ny tranokalam-baovao. Ny ankabeazan'izy ireo dia notsapaina sy nampiasaina-nanaporofo raha nisy traikefa nampiasaina tao amin'ny tranonkalan'ny gazety iray:
Mankanesa amin'ny fanatsarana ny votoatiny, satria ny algorithms amin'ny alàlan'ny fikarohana dia mankasitraka ny votoatin'ny kalitao amin'ny laharana ambony ao amin'ny SERP. Noho izany, avelao ny votoatiny feno, feno, manan-danja, ary foana ny votoatin-javatra maimaim-poana, miaraka amin'ny lohateny lehibe izay mamaritra ny votoatin'ny pejy Internet amin'ny tsara indrindra. Aza misalasala mampiditra ny teny fanalahidy na fehezanteny manan-danja ao amin'ny lahatsoratra momba ny vatana, ary koa lahatsoratra an-tsoratra ny sary. Amin'izay, dia mariho fa ny fihazonana ny dikan'ny teny fototra tsara indrindra eo amin'ny 2% amin'ny asa soratra rehetra. Ho an'ny fampahalalana bebe kokoa, afaka mijery ny toro-hevitra ofisialy amin'ny Google ianao
Manao SEO ho an'ny tranokalam-baovao, tokony hifantoka manokana amin'ny URL fanatsarana ianao rehefa mamorona pejy na lahatsoratra. Manana fanamarinana indroa ny fandefasana ny teny fanalahidy havanana na keyphrases amin'ny URL rehetra noforoninao, ary ny fanavaozana ny efa misy dia mety ho hevitra tsara - mahasoa ho an'ny mpamaky anao, ary mora kokoa ho an'ny crawling amin'ny fikarohana robots amin'ny fotoana iray ihany. Ankoatra izany, raha jerena ny SEO ho an'ny tranokalam-baovao, dia voatsikera ianao hampiditra ny URL tsirairay miaraka amin'ny tarehintsoratra tsy manam-paharoa mihoatra ny telo isa amin'ny halavany.
Ary eto dia izao no tonga ny meta indrindra amin'ny meta torolalana ho an'ny SEO ho an'ny tranokalam-baovao, noho izany dia tsara kokoa ny mandinika ireto manaraka ireto rehefa ampidirina azy ireo:
Voalohany indrindra, ny meta tag toy ny news_keywords dia hanampy ny mpitory (mamaritra sy mametraka ny angon-drakitra betsaka), ary koa ireo mpamaky tena (maka mora kokoa ny mijery na mizara ny vaovao, ohatra , amin'ny alàlan'ny rohy sosialy)
Tadidio fa ny mari-pamantarana tokana azonao ao amin'ny URL -nao sy meta tags dia komas. Ampiasao izy ireo mba hanasarahana ny teny sy ny fehezan-teny fototra.
Ny ankamaroan'ny teny fanalahidy eto dia mety hitondra ny lanja mitovy, midika izany rehefa miresaka SEO amin'ny tranokalam-baovao
Anisan'ny sehatra mahasoa indrindra eto ny safidy hampiasa Tenifototra 10 toy ny teny, e. h. , hamorona marika vaovao ho an'ny lahatsoratra navoakanao vaovao. Raha manao izany ianao, dia hanana faharesen-dahatra mivaingana foana: raha toa ka misy lahatsoratra iray manaporofo fa tsy misy dikany amin'ilay lohahevitra, dia afaka manondro azy io haingana dia haingana ny mpampiasa azy io.